Treasure Hunt | YoeYar CG Blog
Treasure Hunt ရတနာသိုက် Animation ကို ၂ဝဝ၇ က Unicef Myanmar အတွက် လုပ်ခဲ့တယ်။
ဇာတ်လမ်းက မီးမီးလေးဟာ လတ်တလော ကွယ်လွန်သွားတဲ့ အဖေ့ရဲ့ ဓာတ်ပုံနောက်က မတော်တဆတွေ့တဲ့ မြေပုံလမ်းညွှန်အတိုင်း လိုက်ရှာတယ်။ နောက်မြေပုံတစ်ခုတွေ့တယ်။ အဲဒီမြေပုံကို လိုက်ရှာပြန်တယ်။ နောက်မြေပုံတစ်ခု တွေ့ပြန်တယ်။ အဲလိုနဲ့ ဇွဲမလျှော့ဘဲ သဲသဲမဲမဲ လိုက်ရှာတာ နောက်ဆုံးမှာ….. ku ku ku…^_^ I’m evil.. I won’t tell you anymore… ။
Treasure Hunt: Mi Mi
ဒီ ဇာတ်ကောင်က အဲဒီဇာတ်လမ်းရဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင် မီးမီး ဖြစ်ပါတယ်။ ( ငါ့မိန်းကလေးဇာတ်ကောင်တွေက ဘာလို့ မီးမီး ချည်းပဲ ဖြစ်နေလဲ မသိပါဘူးနော်။ ) Clothes Modifier နဲ့ Hair and Fur Modifier ကို Production မှာ ပထမဆုံး စမ်းသုံးထားတာဖြစ်တယ်။ တကယ်လုပ်တော့ကျ Renderနှေးလွန်းလို့ ဆံပင်ပုံစံ အတုံးကြီးလုပ်ပြီး ခေါင်းမှာ ကောက်စွပ်ပေးလိုက်ရပါတော့တယ်။
တစ်ဦးတစ်ယောက် သေဆုံးခြင်းကို နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ စတွေ့ဖူးတာ ကလေးတွေအတွက် တုန်လှုပ်စရာ အတွေ့အကြုံ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကို ပြေပျောက်သွားအောင် ဖြေဖျောက်နိုင်အောင် ဘယ်လိုရင်ဆိုင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းကို ဒီမှာ အကြံပြုထားပါတယ်။
ဒီ အန်နီမေးရှင်းလုပ်တော့ သီချင်းသုံးပုဒ် စပ်ယူရပြီး အရုပ်တွေကို အကြိမ်ကြိမ် ပြန်လှုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ အခုကြည့်တော့ ဘယ်လိုမှ အားမရပေမယ့် လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာကိုတော့ ကျေနပ်မိတယ်။ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်း၊ အရုပ်လှုပ်ကတော့ မောင်မောင်ဆန်း။ တေးရေးကတော့ ဂီတမိတ် ကိုကျော်စွာထွန်း၊ တေးဆို ခင်လပြည့်ဝန်း။ ဖေဖေ့ရဲ့ လက်ရေးစာကိုတော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ဂူဂူးက စေတနာ ဗရပွနဲ့ ရေးပေးခဲ့ပါတယ်။
##29/07/10 Treasure Hunt video was uploaded to YouTube and Vimeo.
Treasure Hunt from Lionslayer on Vimeo.